Top Ties Manufacturers sy Suppliers | China Top Ties Factory
Top fifandraisana dia natao mitovy ny lohany, vozon'ny polymer insulators, bakoly insulator, taorian'ny karazana insulators ny mpitarika ampiharina, hatrany ambony lafiny insulator. Insulator tie ambony dia ampiasaina ho an'ny mpitarika ny nafatotra ho amboarany niteraka avy eny ambony any MV sy fampitana hery HV tambajotra. Tie ambony for polymer insulator no vita amin'ny aluminium nanarona vy, fitaovana aluminium. Ara-nofo ny heliformed ambony fifandraisana ara-nofo dia miankina amin'ny karazana mpitarika mba ho ampiharina amin'ny, ACCC na ACSR. Preformed tie ambony insulator koa fitaovana amin'ny kofehy rube mba mihena abrasion ny mpitarika sy ny insulator.
Jera ny vokatry tariby niforona insulator ambony fifandraisana amin'ny karazana manaraka ireto: tie wraplock ambony, ambony tie kambana (roa fanohanana tie). Samy helical ambony karazana fifandraisana manome ny fanatsarana ny fiarovana ny fomba tariby, raha oharina amin'ny tanana tie ny tsipika mpiaro hazo
Ny manam-paharoa, ny iray-tapa famolavolana tsy misy horonan-adin-tsaina, na avo mitazona fitaovana manome antoka amin'ny fametrahana mora ela velona mandritra ny preformed insulator fifandraisana ambony.
Jera dia afaka ny hanana preformed fihenjanana misaintsaina sy preformed ambony fifandraisana araka ny tariby famaritana, insulator vozony sy ny savaivony lavitra eo amin'ny tsato-kazo.
Tongasoa eto amin'ny hifandray antsika.